Siri "wuxuu ku dhawaaqayaa" dhacdo soo socota Abriil 20 | Waxaan ka socdaa mac
Kaaliyaha Apple wuxuu umuuqdaa inuu haysto taariikhda saxda ah ee dhacdada oo aan wada sugeynay bisha Maarso, taariikhdani waa Talaadada soo socota, Abriil 20 markaa haddii ay run tahay, waxaan ku dhow nahay inaan Apple ka helno xaqiijin rasmi ah.
Hadday run tahay, macluumaadkan waxaa sifeeyay saaxir laftiisa waxaan usbuuc un naga maqnaan laheyd munaasabada taas oo la filayo imaatinka moodooyinka cusub ee iPad-ka, laga yaabee inay yihiin AirTags iyo yaa garanaya haddii ay jiraan waxyaabo kale oo kadis ah.
Waxa kaliya ee maqan ayaa ah xaqiijinta rasmiga ah ee ka socota Apple si loo ansixiyo ogeysiiskan Siri. Markii aan kugu weydiinno luqadda Ingiriisiga ku saabsan goorma ayaa dhacdada xigta noqon doontaa Apple oo ka jawaabeysa sidan:
Sawirka oo ah midka aan ka helno warbaahinta sida 9to5Mac Waxay si cad u muujineysaa taariikhda aan heli karno soo bandhigidda iyo goobta. Caqli ahaan, iyo sababta oo ah cudurka faafa ee COVID-19 oo saameynaya meeraha oo dhan, ma arki doonno muhiimada waji ka waji sida dhowr sano ka hor, waxay ku jiri doontaa fiidiyoow iyo oo laga sii daayo adduunka oo dhan oo ka socda Apple Park.
Hadda waxaan kaliya u haynaa Apple si aan u xaqiijino taariikhdan soo shaac baxday ama si rasmi ah ugu dhawaaqay Siri. Mabda 'ahaan way sameyn karaan saacadaha soo socda laakiin tani waa wax aanan xaqiijin karin. Hadda waxaan horeyba u haysannay maalin aan qabanno, waan arki doonnaa haddii munaasabaddu ugu dambeyn dhacdo ama aysan dhicin Abriil 20. Ma u malaynaysaa inay taasi noqon doonto taariikhda la doortay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Siri "wuxuu ku dhawaaqayaa" dhacdo soo socota Abriil 20